Phantse yonke imibala emitsha ye-HomePod mini ngokuthumela nge-10 kaJanuwari | Ndisuka kuMac
Phantse yonke imibala emitsha ye-HomePod mini ngokuthunyelwa nge-10 kaJanuwari
Ukufika kwee-HomePods ezinemibala kwiivenkile ze-Apple kwaba luvuyo kwabaninzi abasebenzisi ababona kule HomePod isipho esigqibeleleyo seKrisimesi. Ewe, kakhulu kangangokuba ngaphantsi nje kweentsuku ezintathu isitokhwe semibala emininzi emitsha siphelile kwaye zibonisa imihla yokuhanjiswa kweveki yesibini kaJanuwari.
Bonke abo bafuna ukuthenga enye yezi zithethi ezinemibala kuya kufuneka babe nethamsanqa kakhulu ukuze bakwazi ukuthenga kwivenkile ye-Apple. Asikuko ukuba uphawu oluqinisekileyo "luthengisiwe" lwaxhonywa, kodwa sisondele kwaye kungenxa yokuba ngelixa sibhala eli nqaku, imodeli yombala omtsha kuphela ekhoyo yokuhanjiswa ngeentsuku ezimbalwa ibhlowu. i-orenji kunye netyheli zihambile kude kube nguJanuwari 10.
Ixabiso elihle, umgangatho wesandi, uSiri kunye nemibala
Kukuba esi sithethi sika-Apple sinawo onke amatikiti aza kuthengiswa ngeli xesha. Ixabiso lemali elinikezelayo, longezwe kwiinketho zokusebenzisa njengeziko le-accessory kunye nemibala emitsha Benza ngokungathandabuzekiyo enye yezona mveliso zinqwenelekayo kwezi ntsuku zezipho okanye nokuba ziziphiwe.
Ifoto ephezulu ye-HomePod mini eorenji kunye nomhla wokuziswa kwe-10 kaJanuwari 2022 ibalulekile. Ekuqaleni, isitokhwe ababenaso kwiivenkile ze-intanethi kunye nezomzimba zabonakala ngathi zisindisiwe ekunqongopheni, kodwa yayingumbono nje ... Kwiiyure ezimbalwa kamva i-website ye-Apple ibonisa ubunyani kwaye oku akukho nto ngaphandle kokulibaziseka ekuhanjisweni de kube ngenyanga kaJanuwari, imihla edlulileyo engundoqo yelizwe lethu yezipho. Ngaba uyifumene eyakho phambi kokuba zithengiswe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Phantse yonke imibala emitsha ye-HomePod mini ngokuthunyelwa nge-10 kaJanuwari
Nantsi indlela iMacBook Air M1 enokuthi ikhawuleze ngayo njengeMacBook Pro M1
Inkampani yeTile iya kuba yinxalenye yeLife360